Wararka - Furaha gaariga wuxuu leeyahay afar shaqo oo qarsoon, wuxuu badbaadin karaa nolosha xilliyada deg-degga ah
Furaha gaariga wuxuu leeyahay afar shaqo oo qarsoon, wuxuu badbaadin karaa nolosha xilliga degdegga ah
Kaliya oqalinka albaabka taksiga
Baabuurta badankood waxay furi karaan oo keliya albaabka taksiga markaad furaysid furaha fog, oo kaliya markaad laba jeer riixdid, albaabbada oo dhan waa la furi karaa.
Darawalada qaarkood waxay gaariga ka qaadaan meel gawaarida la dhigto oo fog, Haddii ay furaan albaabka taksiga, waxay ka hortagi karaan ragga xun inay gaariga ka fuulaan kursiga dambe ee gaariga ama albaabka kursiga hore ee rakaabka. Marka, shaqadan naf-badbaadinta ahi runtii waa qaali, miyaanay ahayn, gaar ahaan haweenka wadayaasha ah?
Dami daaqada gaariga
Ka dib marka gaariga la dhigo, si toos ah mashiinka u dami, ka dibna jiid gacan-qabsiga si aad gaariga uga degto oo aad u baxdo. Laakiin si lama filaan ah dib u jaleec, dib u aragtay in la xiro daaqadda ama qorrax-dhaca. Maxaad sameyn doontaa waqtigan? Waa inuu dib ugu noqdaa gaariga, daarto shidista dabka, xir daaqadaha iyo qorraxda, ka dibna mar labaad gaariga xiro. Ma dhib baa?
Xaqiiqdii, dadka badankood ma oga, ka dib marka gaariga la xiro, illaa intaad riixeyso oo aad qabaneyso badhanka qufulka ee furaha hagidda, muraayadda iyo qorrax-dhaca gaariga ayaa si otomaatig ah u xirmaya! Gawaarida qaar, ilaa iyo inta la adeegsanayo qalabka qufulka koontaroolka fog, daaqadaha oo dhan si toos ah ayey u kici doonaan oo xiri doonaan. Shaqadani runtii waa mid aad wax ku ool ah, waa injiilka Martha, haha.
Soo hel ah gaariga si dhakhso leh
Haddii aadan dhaqso u heli karin gaarigaaga, furaha gaariga ayaa leh badhan kaa caawin kara. Tusaale ahaan, markaad tagto suuqa laga dukaameysto oo aad dhigato gaarigaaga meel gawaarida la dhigto oo dhulka hoostiisa ah, waxaad u baahan tahay inaad raadiso adduunka oo dhan markii aad ku soo noqoto si aad u soo qaadato. Ha argagixin waqtigan. Haddii aad rabto inaad hesho gaarigaaga, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad riixdo badhanka guduudan ee ku yaal furaha gaariga si aad gaariga uga yeerto dhawaaq. Tani waxay sahlaysaa helitaanka gaarigaaga, laakiin taxaddar, Ha u adeegsan shaqadan kiiska xilliga soo bixidda, maadaama ay saameyn ku yeelan doonto dadka kale markaad isticmaasho.
Moodooyin badan oo furaha kontoroolka fog waxay leeyihiin badhan kaa caawinaya inaad si toos ah u furto jirridda. Muddo dheer riix badhanka furitaanka jirridda (gawaarida qaar, laba-guji), jirku si otomaatig ah ayuu u furi doonaa. Haddii aad hadda ka soo baxdo dukaanka oo aad gacanta ku sidatid boorsooyin waaweyn, waxay noqon doontaa mid aad u ficil ah xilligan, waxayna ku siin kartaa wax badan oo kugu habboon hal taabasho.